2017-06-19 @ 21:26 in Kolontsaina
Tsy dia maharaka ny revin'ny tanora intsony angamba aho, na tsy te-hahalala tsotra izao. Malaza ary ireo ny lahatsarin-kiran'i Gangtabab sy ny an'i Arnaah. Samy mpihira lazaina ho tanora avokoa ry zareo ireo. Ny iray aza moa dia efa nitarika ny antoko politika madio, ary manana pejy Facebook amin'izany mihitsy.
Tsorina fa tsy nahalala ny fisian'ireo aho raha tsy noho ny fahatafintohinana hita ao amin'ny media sosialy, fahatafintohinana avy amin'ny ray aman-dreny indrindra indrindra. Fa inona no tena mahatafintohina?
Tafintohina ianareo fa lasa mifaninana amin'izao tontolo izao ny Malagasy eo amin'ny sehatry ny hira-dihy feno fihantsiana. Tsy manaiky gisitra mihitsy amin'io taranja fampandihizam-pitombenana io isika Malagasy, miseho ho menatra nefa manana ilay talenta.
Tafintohina ianareo fa lasa "plage" ho an'ny ankizy sy ny artista ny toerana rehetra fa tsy voafetran'ny tora-pasika intsony. Tsy mifanandrify amin'ny toetr'andro eto afovoan-tany ilay fitafy amin'ny kilaoty tena fohy na/sy silipo tsy misy amboniny. Tafintohina ianareo mandre ireo ankizy tsy mbola maoty akory manao firesaky ny tanoravavy miady... lehilahy.
Tafintohina ianareo fa ny iray amin'ny hira dia amin'ny feonkira tena malagasy. Tena malagasy ilay feon-kira, raha mbola tianareo iadian-kevitra ny tonony izay amin'ny teny malagasy ihany koa. Tafintohina ianareo fa hay azo ampivadiana tsara ny feonkira nentim-paharazana malagasy sy ny fandrosoana na fibolisarana hita amin'ireo fantsona fahitalavitra vahiny sy ihazakazahan'ny fantsona fahitalavitra malagasy aseho ny tanora ihany koa.
Tafintohina ianareo fa noho ny fitadiavan-daza dia hay misy Malagasy mahavita ireo fihetsika anaovana tsy ankiteniteny ireo. Hay misy mahavita mitanjaka eny ankalamanjana. Fa hevero kely anie fa raha tsy malagasy izao no hita mandihy sy mitanjaka toa tsy mampaninona antsika akory ny mijery azy, mety ho faly sy mihorakoraka ery ianareo. Tsy resy lahatra anefa aho hoe tena tsy ankafizinareo mihitsy ny mijery zavatra tahaka ireny na tsy Malagasy aza ny manao azy. Raha ny tany amin'ny roapolo taona lasa tany dia ekeko fa be no tsy mahazaka, fa raha ny amin'izao fotoana izao kosa tonga dia voateny hoe tery saina na efa antitra raha milaza tena ho tsy mankasitraka mijery azy ireny.
Tafintohina ianareo fa mampihatra sy manararaotra ny fahalalahana ry zareo, fa raha tsy misy ny mibolisatra dia hay fantatra ihany fa ilaina hatrany ny fifehezana, ary fifehezana henjana mihitsy aza, na dia lazainareo ho didi-jadona aza izany fifehezana izany...
Taratry ny fikoroso-fahan'ny fiaraha-monina sy ny fitaizana eto Madagasikara ihany anefa no asehon'ireo artista ireo, nefa vao maika ho tafintohina ianareo raha ilazako hoe izany no izy rehefa mandray ny teny vahiny ho teny ampianarana ny zanatsika. Fa maninona no mitetateta hampianatra ny zanakareo amin'ny teny vahiny raha tsy manaiky mialoha avy hatrany ny kolontsain-dry zareo e? Rehefa misafidy hianatra amin'ny fiteniny dia tokony hizaka izay safidy izay amin'ny fanekena ny kolontsainy sy ny fomba fisainany ihany koa. Miala tsiny raha mahatafintohina anareo io teniko farany io sy ny famoahako ireo lahatsarin-kira roa mahatafintohina anareo ireo.